China Yakareruka Western Dhizaina Yakasimba Solid Wood Wood Bedroom Sofa Midziyo # 0109 Kugadzira uye Fekitori | Yamazonhome
Yakareruka Western Dhizaini Yakasimba Solid Wood Wood Mubhedha Wepamba Yemakamuri Furniture Mubhedha # 0109
Zita: Mubhedha wakasimba wehuni
Muenzaniso nhamba: Amac-01 09
Zvinoshanda zvinangwa: Mukuru
Kukura: 1850mm * 2055 * 865mm
Ruvara: Sezvinoratidzwa mumufananidzo kana yakagadzirirwa
Inokodzera nzvimbo: Kamuri yekurara, Hotera, Kudzidza
Kubva: Weifang, China
Zvishandiso: Huni yakasimba
Yese yakasimba huni mubhedha
Kusarudzwa kwemhando yepamusoro chena oak ine simba rakasimba rekutakura uye simba rekubata nzara kupfuura mamwe matanda. Mumwe muoki weiyo yakafanana tsananguro inogona kutsigira maviri akajairika matanda. Yakagadzirwa nemuouki uye inotakura mutoro unorema. Izvo zvakaoma uye zvakanaka, zvine hutano uye zvakatipoteredza zvine hushamwari, pasina kunetseka nezve kunhuhwirira matambudziko, uye mutoro wakadzikama, Inogona kutakura huremu hwevarume vakuru vasere.
Yakagadziriswa backrest dhizaini
Musoro wepamusoro wakagadzirwa nematanda akaomarara, neakajeka mameseji uye kugadzikana kwakasimba kwemubhedha. Iyo dhizaini dhizaini yakagadziridzwa mune arc, uye dhiri rekushongedza rinoita kuti ive yakasununguka kutsamira. Chimiro chemidziyo chinofanira kubva mumuviri wemunhu, zvichienzaniswa nezvinhu zvakatwasuka, Iyo curve yakasarudzika padhuze nemuviri wemunhu inowonekera. Mugadziri anotora iyo "scene-style" dhizaini nzira, kubva pakona yekurerekera, kukwirira kwekuwana nyore, kukwirira kwemubhedha we30cm, nezvimwewo, kuongororwa kwakadzokororwa, uye kududzirwa kwekunyaradza kwechokwadi
Socket socket pane yekumashure kwepaneru
Kune bhodhi rekuchengetera kuseri kwemusoro wemubhedha wakawanda, uyo unogona kushandiswa kuisa mabhuku, makapu emvura, nezvimwewo, uye rakagadzirwa nesocket anti-shock, iri nyore kubhadharisa, kuti ugone kunakirwa nefoni yako mubhedha. Kaviri gwara redenderedzwa kugadzira kumusoro kwemubhedha, inosanganiswa nerunako runako, yakavhurika Nyika yakavanda mukati.
Zvakanyatsorongedzwa mubhedha wehuni wakasimba
Iyo yakasimba huni yemubhedha muviri inotora yakasimba huni mutsara mitsetse, ayo akaomeswa akarongedzwa neakakwira arambe achigovaniswa kugovera, yakasimba inotakura kugona uye yunifomu simba, yakagadzikana chimiro, isiri nyore kudonha. Chatakavaka mubhedha wekufema, marangwanda anoumbwa nemuouki slats, uye mweya unofema.
Mahara anoenderana nembatya njanji
Rutsoka rwemubhedha runogona kuve nerusununguko kushongedzerwa netsvimbo yetsoka, iyo inogona kuiswa pazvipfeko zvemunhu, masherefu, nezvimwe, zvakapusa uye zvinoshanda. Aya maviri masitayera anoenderana anozogadzira imwe hupenyu hwepamusha hwako.
Bold rakatenderedzwa rakasimba huni mubhedha makumbo
Wese wakasimba huni mubhedha, hapana dehwe maitiro, hapana zvakasiyana-siyana huni puranga, gobvu yakasimba mubhedha tsoka, chaiyo kurerekera kona, kugadzikana mutoro kutakura, kukupa kuzara kwekuchengeteka. 17cm kubva pasi, pasi haina kubata pasi dhizaini, iri nyore Geza iwe uchenese uye utarisire iyo yepasi nzvimbo.
Yemazuva ano yakapusa solid huni yekurara mubhedha
Kunyangwe kana "Ini" ndisingakwanise kugovera matambudziko muhupenyu kwauri
"Ini" ndega ndinogona kuenda newe kumba
Kudzikama uye kwazvakarerekera toni
Iyo yekumisikidzwa yakaburitswa neyekutanga huni ruvara
103 dhigirii ergonomic dhizaini yemubhedha musoro
Deredza kuneta kwezuva rimwe
Pashure: Oak Wadhirobe Silent Damping Slide Rail Sliding Door Wadhirobe Yekurara Midziyo # 0108
Zvadaro: Unitarp Inoyangarara Inflatable Yoga Mat Vakuru Vanoshambira Padziva Mvura Yoga Mats NeEva Asiri-Anotsvedza Pad 0389
Nordic Imwe Yakasimba Solid Wood Sofa Yakagadzirwa Fu ...
Multi-Inoshanda Imwe Sofa Kurarama Kamuri Furnit ...
Nyore Casual Round Tafura neLegs, Mini Solid ...
Nyore Solid Wood Furniture yeKudya Kamuri Sid ...
Solid Wood Kurarama Kamuri Fenicha TV kumira # 0014
Wooden Deluxe Villa Cat Imba nevharanda uye Ba ...